नियम र विधिहरू: कसरी उपभेदों गर्न गर्भाशय रोपेर गर्न
मौरी पालन - कृषि उत्पादन मा विशेष प्रवृत्ति, जो ज्ञान, सीप र धैर्य को धेरै आवश्यक छ। अक्सर यो परिवार मा गर्भाशय वा replanting प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक छ। यो कुनै पनि तयारी बिना गरेको छ भने, गर्भाशय को मौरीले लिन सक्दैन, र यो सिर्फ मर्छ। कसरी उपभेदों गर्न गर्भाशय रोपेर गर्न, जो यो नियम अवस्थित र विधिहरू लेखमा वर्णन गरे।
मौरीले किन शत्रुतापूर्ण ले podsazhennuyu गर्भाशय हो?
नयाँ रानी गर्न कीराहरू को नकारात्मक मनोवृत्ति धेरै कारक कारण छ र मौसमी छ। यो मौरी बस्ती र गर्भाशय को वातावरण को राज्य, साथै मा बाटो असर उपभेदों मौरीले को गर्भाशय रोपेर गर्न।
वातावरण ठूलो महत्व छ। यो मुख्यतया मौसम अवस्था र अमृत समावेश बिरुवाहरु को उपस्थिति छ। मौसम, को गर्भाशय replanting को समय, मौसम अवस्था पनि मौरीले मनोवृत्ति प्रभावित। यसलाई न्यानो र शान्त छ भने, राम्रो कीराहरू आफ्नो परिवार मा एक नयाँ गर्भमा लिन। यो हावाको वर्षाको र चिसो छ भने, मौरीले को भाग मा राम्रो स्वागत प्रतीक्षा गर्नु हुँदैन। यो मौसममा, तिनीहरूले क्रोधित र आफ्नो जीवनमा कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न रुचि छैन।
को गर्भाशय गर्न मौरीले मनोवृत्ति मा ठूलो प्रभाव रिश्वत छ। भने, कीरा दुष्ट हुन्छन्। replanting लागि गर्भाशय को मौरीले कम्तिमा केही घूस मा छ जो अवधि चयन गर्न प्रयास गर्नुहोस्। त्यसपछि तिनीहरूले कम आक्रामक र नयाँ गर्भमा स्वीकार गर्न सक्छन्। यदि घूस समयमा र नयाँ रानी मौरीले फिड replanting पछि अघि, आवश्यकता छैन।
कीराहरू गर्न गर्भाशय को अनुपात मौसम अवधि भर पर्छन्। यसलाई त्यहाँ अझै पनि एक प्रमुख घूस हुँदा ठाँउ, गर्मी मा लिन्छ सजिलो replanting छैन। तर ऊ आउँछ जब मौरीले कम सावधान, तिनीहरूले व्यस्त सङ्कलन अमृत हो हुन्छन्। यो समयमा, यस गर्भाशय कलम बांधने सफल छ। यस मौरीले को अनुपात यो दिनको समय असर गर्छ। Replanting साँझ गर्न सिफारिस गरिएको छ। यो समय मा, मौरीले कम सक्रिय छन्। तर रानी मौरीले हटाउने को चयन सबै भन्दा राम्रो दिउँसो गरेको छ।
मौरीले को अनुपात परिवार एक गर्भाशय बिना बसोबास जसमा अवधिको अवधि भर पर्छ। अनाथ कीराहरू उनको मृत्यु, वा हटाउने भएको hive देखि पछि तीन घण्टा पछि गर्भाशय लिन राम्रो हुनेछ। यो समयमा, मौरीले उत्तेजना settles, र तिनीहरूले उनको लागि देख रोकिनेछ।
परिवार रानी बिना लामो रहन हुँदैन। उनको मौरीले आदर मा नकारात्मक प्रभाव प्रतीक्षा लामो समयसम्म। एक गर्भाशय परिवार बिना कुनै थप छ भन्दा घण्टा हुन सक्छ, अन्यथा यो रानी कक्षहरू fistulous हुनेछ, मौरी तिनीहरूले राख्नु। परिवार का गर्भाशय मा रानी कक्षहरू र तुरून्त बोट गर्न अबरोध गर्न: यो सबै, को पाठ्यक्रम, सम्भव ठीक छ। तर यो मनोवृत्ति धेरै बुरा हुनेछ।
कीराहरू कहिल्यै तिनीहरूले अमृत को खोज मा वरिपरि उडान सुरु गर्दा, प्रारम्भिक वसन्त नयाँ रानी मार्न, र यो पछि पहिलो हप्ता भर हुनेछ।
प्रकृति अन्त हुँदा मौरीले गर्भमा, रिश्वत podsazhennym गर्न आक्रामक छन्। यो समय अगस्ट र सेप्टेम्बरमा छ। नकारात्मक मनोवृत्ति पुरानो उडान मौरीले मा उच्चारण। गरिब स्वागत कीराहरू तिनीहरूले केही समय कक्ष मा बसे छ, विशेष गरी यदि जवान बाँझो गर्भमा व्यवस्था। मौरी, आमा रक्सी देखि बस देखा थियो, जसले, सुस्त, उनको आन्दोलनहरु चिल्लो। थप तिनीबारे राम्रो यसलाई तिर परिवार मनोवृत्ति। हामी उमेर, मोबाइल हुन्छ, यो परिवर्तन मौरी मनोवृत्ति गर्न, तिनीहरूले उनको वैमनस्यता संग अभिवादन।
podsazhivayut गर्भाशय उपभेदों कारणहरू
त्यहाँ गर्भाशय replanting आवश्यक छ कि अक्सर, परिस्थिति यस्तो हो। मौसम भर हरेक beekeeper यस्तो समस्या सामना गर्नुपरेको थियो। को गर्भाशय replanting मा नयाँ उपभेदों निम्न कारणहरूले गर्दा गरिन्छ:
यदि पुरानो मौरी बस्ती को पूर्व रानी गरिबी विकास।
जब केही कारण लागि गर्भाशय छैन।
यदि cuttings र कोर जवान राज्य संग गठन गर्दै हुनुहुन्छ। यस मामला मा, बाहिर भ्रूण गर्भाशय, जो मार्फत मौरीले संख्या तीव्र गतिमा वृद्धि हुनेछ replanting परिवार बलियो बनाउन। beekeepers अघि अक्सर प्रश्न उपभेदों गर्न गर्भाशय रोपेर रूपमा उत्पन्न हुन्छ। त्यहाँ थुप्रै तरिकामा थप एक उपयुक्त छ कि कुनै पनि एक छनोट, को apiary को व्यक्तिगत विशेषताहरु विचार, र अन्य धेरै कारक हो।
Stepanenko उपभेदहरू विधि मा uterine replanting
मौरीले आत्म-दोहराने गर्छन। यो swarming भनिने प्राकृतिक प्रक्रिया हो। मौरीले वस्तु मह, को लाभ प्रतिबिम्बित छ जो सङ्कलन छैन देखि उहाँले beekeepers गर्न समस्या धेरै ल्याउँछ। यस प्रक्रिया रोक्न धेरै तरिकाहरू छन्, तर Gennady Stepanenko उत्पादन राज्य artificially प्रदान गर्दछ।
Stepanenko को उपभेदों गर्न गर्भाशय कसरी रोपेर गर्न? यो गर्न, लेट अप्रिल मा प्रिपेरेटरी काम सुरु गर्नुहोस्। खुला brood र गर्भाशय संग फ्रेम दुई प्रभाग मा एक जाली को माध्यम द्वारा विभाजित छ जो hive हटाइएको छ। सानो खण्ड मह संग फ्रेम राखिएको छ, र केन्द्र मा - खुला brood संग गर्भाशय। बरु प्रमाण अर्को टुक्रा देखि छापिएको brood संग जफत उपकरण माउन्ट फ्रेम को।
Uteri खोज्नु र एउटा सानो खण्डमा माउन्ट छ जो एक विसंवाहक राख्नुभयो। यो विभाग सामग्रीहरू देखि उपभेदों बनाउँछ। त्यसपछि गर्भाशय को विसंवाहक देखि र उपभेदों उत्पादन गर्न मौरीले संग हटाइएको छ। यो गुँडमा विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण छ। अर्को, स्ट्रिप्स मा सेल मार्फत सेल कटौती र दराज मा माउन्ट। अनावश्यक अन्डा क्रम संग सख्त अनुपालन संग, एक मिलान नष्ट गरे। दुई अन्डा चोट, र एक बाँकी छ। त्यसपछि सबै स्लट विस्तार र nukleusnye cuttings गठन। यो बिछाउने को प्रक्रिया पालन गर्न रहनेछ।
पहिलो विधि replanting मा गर्भाशय को एक प्रत्यक्ष offshoot छ
को गर्भाशय नयाँ परिवारमा रही, यो सम्बन्ध मा मौरीले देखाउन कि आक्रमण बाट सुरक्षित छ किनभने छैन यो जोखिमपूर्ण मानिन्छ। सीधा उपभेदों गर्न गर्भाशय कसरी रोपेर गर्न? यो गर्न कठिन छ। पहिलो तपाईँले पुरानो गर्भाशय को परिवार बाट हटाउन र podsazheny उपभेदों हुनेछ जो अन्य देखि नाभिक, हटाउन आवश्यक छ। नयाँ गर्भाशय सेल को एक टुक्रा संग हटाइएको र पहिले पुरानो बसे ठाउँमा राखिएको छ। मौरीको चाका तीन दिन चिन्ता गर्न आवश्यक छैन। त्यसपछि मात्र तपाईं के भइरहेको छ जाँच गर्न आवश्यक छ।
को उपभेदों गर्न गर्भाशय कसरी रोपेर गर्न? तपाईं replanting को प्रत्यक्ष विधि प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं यसलाई निम्न मामला मा लागू गर्न सकिन्छ भनेर थाहा हुनुपर्छ:
पुरानो रानी जसको अन्डा-बिछाउने भ्रूण र जवान मा अवरोध छैन, प्रतिस्थापन गर्दा।
एक समयमा मौरी बिरुवाहरु मनैदेखि ब्लूम हुनेछ जब।
एक ठूलो brood संग सानो परिवार।
परिवारमा, जहाँ विशाल बहुमत जवान मौरीले छन्।
प्रत्यक्ष replanting को दोस्रो विधि
को उपभेदों गर्न गर्भाशय कसरी रोपेर गर्न? निम्नानुसार यो विधि को नियम हो:
परिवार को गर्भाशय हटाइयो। यस मौरीले restlessly व्यवहार गर्न थाल्छन्। यो अवस्थामा, तपाईं 12 घण्टा तिनीहरूलाई छोड्न आवश्यक छ।
पछि प्रवेश बन्द, तर पूर्ण छ। को span दुई सेन्टिमिटर बायाँ। भित्र घर मौरी hive ट्रिगर धुवाँ र बन्द।
केही समय पछि, ध्यान दिएर tended, को गर्भाशय उपभेदों मा लगाए? को मौरीको चाका शीर्षकमाथिको 15 सेकेन्ड पछि, यो सुरु, र गर्भाशय 5-10 सेकेन्ड लागि फेरि बन्द गरिएको छ।
उचित समय प्रतीक्षा पछि, प्रवेश अन्यथा प्रमाण को उडान को मौरीले, को गर्भाशय साथ कैद गर्न सक्नुहुन्छ, खुला, तर खुला छैन।
प्रवेश दिन सबै तरिका खुला छ।
उपभेदों मा अप्रत्यक्ष गर्भाशय replanting
यसरी Replanting बाहिर छ यांत्रिक उपकरणहरू प्रयोग गरेर। तिनीहरूले अस्थायी रूपमा द्रोही मौरीले देखि गर्भाशय अलग गर्न आवश्यक छ। अप्रत्यक्ष replanting पनि गर्भाशय को उपभेदों मा राखिएको छ जसमा विधि प्रयोग, बाहिर छ सेल टोपी, कन्टेनर, insulators प्रयोग गरेर।
Titova कक्षहरू मार्फत Spiking
यस्तो सरल उपकरण प्रयोग गरेर विधि, सेल सबैभन्दा लोकप्रिय छ। को गर्भाशय भ्रूण उपभेदों कसरी रोपेर गर्न? यो गर्न, निम्न के:
पुरानो गर्भाशय हटाइयो। बरु, ध्यान दिएर tended गुँड को केन्द्र मा, जवान रानी लगाए, तर केवल कक्षमा।
अस्थायी घर नयाँ गर्भाशय मह संग सेल संलग्न छ।
को गर्भाशय उपभेदों मा दाखिल गर्दा सम्भव? तीन दिन पछि, साँझ यो जारी छ, र उत्पादन आकारको मोम छ।
त्यसपछि, मौरीले व्यवहार हेर्दै। तिनीहरूले गर्भाशय को बल विश्वास गुमाउन भने, यो पिंजरे गर्न तुरुन्तै फर्के। केही दिन पछि एक प्रयास replanting बारम्बार हुनुपर्छ।
उपकरणको लाभ को गर्भाशय को हत्या को लागि अवसर को कमी छ। तर त्यहाँ पनि बेफाइदा छन्। नयाँ रानी, अस्वाभाविक अवस्थामा निहित छ यसको आहार भङ्ग हुन्छ, अन्डा-बिछाउने निलम्बित छ। साथै, मौरी चोट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
एक टोपी संग Replanting
केही अघिल्लो विधि बेफाइदा जाल अक्षर प्रयोग गर्न कक्षहरू सट्टा, यदि निर्मूल छन्। को उपभेदों गर्न गर्भाशय रोपेर कसरी सर्वश्रेष्ठ गर्न? यो विधि हुनत प्रक्रिया नै छ, मात्र फरक त्यो छैन एक पटक तल बस्छन छ, तर पाँच घण्टा पछि, धेरै लाभ छ।
यो समयमा, यस मौरीले यो टोपी अन्तर्गत छैन भन्ने महसुस र चिन्ता गर्न सुरु गर्न समय छ। विधि को लाभ को गर्भाशय सामग्रीहरू Vivo मा हुन्छ भन्ने छ। उनको रुचाउने एक समय तरिका मा ठाँउ लिन्छ, यो अन्डा जारी छ। एक को कमी, तर आवश्यक। टोपी अन्तर्गत भित्र पस्नु र मुनि सय gnaw यदि गर्भाशय मार्न सक्नुहुन्छ। यस तरिका, उपभेदों भ्रूण गर्भाशय मा बस्छन।
एक कन्टेनर विसंवाहक संग Spiking
यो विधि धेरै प्रभावकारी हुन्छ। Beekeepers प्राय अरूलाई भन्दा, यो प्रयोग किनभने द्रोही मौरीले र राम्रो रहन अवस्था विरुद्ध गर्भाशय विश्वसनीय सुरक्षा। त्यो शान्तपूर्वक फीड र अन्डा कर्तुतहरूलाई उदाङ्ग पार्छ। को गर्भाशय भ्रूण उपभेदों कसरी रोपेर गर्न? यो गर्न, यी नियमहरू पालन:
पुरानो रानी हटाउन।
मौरीले को brood लागि कक्षहरू चयन गर्नुहोस्। यो ambrosia र खाली कक्षहरू हुनुपर्छ।
यो बोट कक्षहरू गर्भाशय र एक विसंवाहक यसलाई राखे।
कन्टेनर बन्द र प्रमाण को केन्द्र मा राखे।
पछि पाँच वा छ दिन सबै रानी कक्षहरू fistula प्रकार को छुटकारा गर्न। को गर्भाशय संग SOT कन्टेनर हटाइएको र यसको ठाउँमा राख्नु।
एक ट्यूब संग सेल प्रयोग गरेर गर्भाशय को प्रतिस्थापन
भ्रूण गर्भाशय Replanting सजिलो छ। यो मध्य-अप्रिल मा गर्नुपर्छ। पुरानो रानी आफ्नो ठाउँमा एउटा नयाँ राख्नुहोस्, हटाइएको छ। मौरीले आफ्नै कुरा गरिरहेको, को प्रतिस्थापन नोटिस छैन। को गर्भाशय पनि तुरुन्तै छ अन्डा सुरु हुन्छ। त्यसैले बाँझो रानी मौरी रोपेर यदि यो खराब हुनेछ।
को बोट सानो रकममा अमृत स्राव जब प्रतिकूल अवधि, को beekeeper को उपभेदों गर्न गर्भाशय कसरी रोपेर निर्णय? यो सबै भन्दा राम्रो जो एक ट्यूब को व्यापक अन्त संग सम्मिलित छ तल्लो भाग मा, एक masterbatch सेल संग गरेको छ, जो को व्यास आधा सेन्टिमिटरले छ। ट्यूब को निर्माण को लागि पन्नी वा टिन प्रयोग गर्न सकिन्छ। जसको लम्बाइ ट्यूब, को दोस्रो अन्त मात्र एक सेन्टिमिटरले 30-50 मिमी सानो छ। तल ट्यूब महचाका अप बन्द र यो केही प्वालहरू बनाउन आवश्यक छ।
यो कक्ष गर्भाशय मा राखिएको र गुँड को केन्द्र मा queenless परिवार हस्तान्तरण गरिएको छ। धक्का आवश्यकता संग फ्रेम, अन्यथा सेल फिट छैन। पछि पाँच बारेमा दिन inspected छन्। सेल खाली छ भने, गर्भाशय परिवार स्वीकारे। जब नयाँ रानी तिर एक शत्रुतापूर्ण मनोवृत्ति, यो एक ट्यूब मा लुकाउने द्वारा invulnerable बन्नेछ। मौरीले भित्र प्राप्त हुनेछ, उनि गर्भाशय सम्झना छैन यो शरीर को खण्ड बन्द गर्छ। नयाँ रानी मौरी स्वीकार गर्न सक्छन् कि मामला मा, परिवार पहिले नै गर्भाशय, साथै रानी कक्षहरू छ भने।
otrutnevevshuyu मौरी बस्ती मा Replanting
यो प्रक्रिया बाहिर छ सजिलो छैन। यो एक सेल मा कामदार मौरी बिछाउने छैन केन्द्र मा, तीन पाँच टुक्रा देखि अन्डा को बिछाउने गर्छन, र भित्तामा भन्ने तथ्यलाई कारण छ। यस मौरीले को गर्भाशय को रूपमा कामदार मौरी बिछाउने हेरविचार, त्यसैले podsazhennyh तिनीहरूले बस नष्ट गरे।
जसमा एक परिवार रानी कामदार मौरी, कमजोर बिछाउने को भूमिका छ भने, उनको फ्याँकिन्, मौरीले उत्पादन, र प्रमाण को apiary हटाइएको छ। कसरी कामदार मौरी बिछाउने संग उपभेदों गर्न गर्भाशय रोपेर गर्न? एक ठूलो र बलियो परिवार भने, नयाँ रानी चुनिएको। यो बक्स मा राखिएको र trutovochnuyu परिवार मा तल बस्छन छ। कर्कश तुरुन्तै उल्टाउन। यो खातामा कि उडान मौरीले जहिले पनि फिर्ता आफ्नो hive आउन तथ्यलाई लाग्छ। त्यसैले यो मामला मा। दुई वा तीन घण्टा पछि तिनीहरूले trutovochnuyu परिवार, आफ्नो गर्भाशय पूरा जो पुग्न।
replanting उपभेदों मार्फत
यो विधि राम्रो पक्ष साबित भएको छ, त्यसैले तपाईं बहुमूल्य गर्भाशय रोपेर गर्न apiary वृद्धि वा मौरीले को नस्ल परिवर्तन आवश्यक जब यो प्रयोग गरिन्छ। उपभेदों मार्फत भ्रूण र बाँझो नमूनों, साथै यी मौरीले को उत्पादन मा रानी कक्षहरू podsazhivayut। को गर्भाशय भ्रूण उपभेदों कसरी रोपेर गर्न? यो प्रक्रिया गर्न, तपाईं निम्न नियम पालन गर्नुपर्छ:
धेरै फ्रेम मा मुनाहरू सिर्जना गर्नुहोस्। मुद्रित brood प्रत्येक फ्रेम को एक ठूलो भाग कवर गर्नुपर्छ।
मुनाहरू तिनीहरूले एक शरीर समावेश भने, प्रमाण विभाजन गर्न तल बस्न। दुई छन् भने replanting cuttings दोस्रो शरीर प्रयोग।
को गर्भाशय मा तीन चार घण्टा पछि कुनै पनि तरिकामा उपभेदों बस्छन।
तपाईं सेल को layering गर्न रानी मौरीले गर्न accustomed बन्न रूपमा brood थपिएका छन्। यसरी एक पूर्ण मौरी परिवार गठन गरिएको छ।
को उपभेदों कसरी बनाउने र गर्भाशय रोपेर गर्न? मौरी कर्कश को cuttings लागि थप उपयुक्त सानो आकार, भनिन्छ कोर छन्। तर तपाईं सामान्य कर्कश ठाउँ planks अलग यदि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। cuttings को जुदाई apiary देखि एक ठूलो दूरी मा लगिएको भएपछि। यो कि उडान मौरीले आफ्नो मूल स्थान फर्के छैन सुनिश्चित छ।
तपाईं टाढा layering को कर्कश टाढा लाग्न सक्छ भने, तिनीहरू केवल कम मौरीले हुनेछ, तिनीहरूले दूर उड। यस मामला मा, कोर मा जवान मौरीले पानी पर्याप्त रकम प्रदान गर्न आवश्यक छ। तिनीहरूले एक सानो पुरानो हुँदा, पानी आफ्नै उत्पादन गर्न सक्षम हुनेछ।
परिवारको layering देखि गठन बलियो हुन आवश्यक छ। यो उद्देश्य लागि, एक brood उत्पादन मुद्रित। चाँडै हामी दल राज्य आशा गर्नुपर्छ। तिनीहरूले साधारण भन्दा धेरै मेहनती हुनेछ। दक्षता र परिवारको विकास बढ्छ। लेट गर्मी मा मौरीले संख्या, तिनीहरूले दस फ्रेम लागि पछिल्लो हुनेछ कि यस्तो हुनेछ।
नयाँ घर जवान मौरीले मा गर्भाशय को Replanting
छोटो समय तपाईं cuttings को धेरै सिर्जना गर्न आवश्यक छ जब यो विधि प्रयोग गरिएको छ। capped brood, पराग र मह संग hive हटाइएको फ्रेम देखि, मुख्य colonies केलाउँदा। मौरीले पनि gangway को छाया मा झूठ गर्न बन्द हल्लाइन्छ छन्। तिनीहरूले प्लाईवुड हुन सक्छ। खाली फ्रेम हिजो गठन नयाँ उपभेदों हालिदिए छन्। गर्भाशय अगाडि हेर्न र यसलाई राख्न यो स्लट मारा छैन भनेर गर्न आवश्यक छ।
त्यसपछि ramps हल्लाइन्छ छन्। पुरानो मौरीले मेरो परिवार मा उड र जवान ठाउँमा बाँकी छन्। निशान द्वारा मह र brood फ्रेम संग hive मा छ जो एक नयाँ layering, gangway स्थानापन्न। मौरीले पनि notches मा सिधै तिनीहरूलाई crawling। को उपभेदों फस्न जो, सँगै बाँकी संग, र मौरीले यसलाई हुनेछ बाँझो गर्भमा, राखिएको कीराहरू बीचमा।
कसरी उपभेदों मा रक्सी राख्न?
माहुरीको आमा रक्सी हुँदा, यसको गुणस्तर जाँच गर्न सम्भव छैन। को गर्भाशय को replanting को यस्तो विधि सबै भन्दा राम्रो छैन। तर layering beekeepers को जरुरी सिर्जनाको लागि यो कहिलेकाहीं प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसैले मौरीले रक्सी razgryzli छैन, यो एक वसन्त-लोड र शीर्ष आवरण पानामा राखिएको छ। पुरानो उडान मौरीले अभिभावक परिवार बन्द उड मात्र जवान layering रहनेछ। तिनीहरूले आफ्नै सहित नयाँ गर्भमा स्वीकार।
को गर्भाशय मा नयाँ कक्षहरू को Replanting
सेना beekeepers अनुभव मात्र यस्तो विधि। को उपभेदों गर्न गर्भाशय कसरी रोपेर गर्न? तापमान खस्छ जब यो साँझ गर्नुपर्छ, र मौरीले आफ्नो गतिशीलता गुमाउनु हुनेछ। हावा जसको तापमान छ तल 14 डिग्री सेल्सियस हुन लिइएका र आयोजित cuttings देखि मौरीले संग प्रक्रिया फ्रेम लागि। मह यो फ्रेम, यो hive मा चरम छ।
मौरीले चाँडै मह भेला, शान्त हुनेछ, तिनीहरूले खान हुनेछ। यस समयमा तपाईं बाँझो गर्भमा दिनु आवश्यक छ। यसलाई मा मौरीले कुनै पनि ध्यान छैन। कि पछि तपाईं जो podsazheny गर्भाशय मा छेउमा संग उपभेदों फिर्ता फ्रेम राख्नु आवश्यक छ।
बाँझो गर्भाशय Replanting
त्यहाँ मौसम अवस्था र मौसम मा निर्भर गर्दछ आवेदन जो replanting धेरै तरिका छन्। छाप रानी कक्षहरू प्रयोग - सजिलो तरिका, तर यो एक drawback छ। सामान्यतया पूर्व उपभेदों मा replanting गर्न गर्भाशय को एक दृश्य निरीक्षण सञ्चालन। तर यो मामला मा यो रानी हेर्न असम्भव छ। को गर्भाशय बिग्रेको हुन सक्छ हुनत वा छैन रक्सी बाहिर आउँछन्। अनुभव beekeepers उपभेदों मा बाँझो गर्भाशय replanting अन्य विधिहरू प्रयोग।
रक्सी को प्रयोग
बाँझी offshoot गर्न गर्भाशय कसरी रोपेर गर्न? त्यहाँ एक विधि हो जसमा यसको ढुवानी, फोम वा कपास रक्सी मा भिगो र फ्रेम को शीर्ष मा राखिएको अघि लगभग 20 मिनेट replanting, अघि दिन। को मौरी परिवार ठूलो छ भने एउटै tampon, सीधा मा राख्न सकिँदैन। कीराहरू खाना प्रदान गर्न आवश्यक छ। यो एक जरूरी छ। त्यसपछि, फ्रेम कस को polyethylene राम्रो मुहर गर्न आवश्यक छ। पछि रक्सी vapors उम्कन छैन। को रक्सी बलियो गंध हुनेछ यदि यो राम्रो छ। बाँझी offshoot गर्न गर्भाशय कसरी रोपेर गर्न? बीस मिनेट पछि, गर्भाशय ऊन नजिकै फ्रेम मा स्थित छ, त्यसपछि पलीथीन वा क्यानभास बन्द। एक समय podsazhennaya रानी, साथै रक्सी मा भिगो सारा परिवार पछि, मौरीले यसलाई आफ्नै रूपमा हुनेछ।
Motoblock लागि हल। किन्न वा आफ्नो बनाउन?
जैविक मल को स्प्रेडर: वर्णन, समारोह
Holstein गाई: विशेषता। डेयरी गाई
खरायो कालो-खैरो: नस्ल बारेमा सबै
होटल HCC Covadonga3* - स्पेन अतिथि स्वागत!
'IMHO' के गर्छ?
एंजेलीना छोराछोरी - मूल र अपनाए बच्चाहरु। कति बच्चाहरु एंजेलीना?
स्टाइलिश समाधान - सानो भान्सा डिजाइन
Karelia मा र्याफ्टिङ। शीर्ष मार्गहरू
विस्तार polystyrene लागि adhesive फोम "Technonikol"